Uhlu lwe-imeyili lwaseBrazil | I-40,000,00 Brazil Ibhizinisi | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwe-imeyili lwaseBrazil
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwaseBrazil
Uhlu lwe-imeyili lwaseBrazil oluzokunikeza konke okunembile kohlu lwamakheli webhizinisi nabathengi enkampanini yakho. Sinohlu lwe-imeyili yebhizinisi le-4 lwezigidi ezingama-XNUMX ongalusebenzisa ukukhuthaza ibhizinisi lakho. Siphinde sikusize wakhe ibhizinisi lakho le-Brazil elenzelwa noma uhlu lwama-imeyili kusuka ezigabeni zezimboni ezithile noma umuntu othize onjenge-CEO, i-CFO, Umnikazi, Umphathi, Umthuthukisi njll.
Uhlu lwe-imeyili lwaseBrazil luzokusiza ukukhuthaza ibhizinisi lakho eBrazil. Ungafinyelela kubantu baseBrazil kalula ukusebenzisa le database ye-imeyili. Futhi uma ufuna ukwakha uhlu lwakho lwe-imeyili lwaseBrazil ungathintana nathi. Sizokusiza ukuthi wakhe uhlu lwakho lwe-imeyili oluhlosiwe kusuka eBrazil.
Uhlu lwe-imeyili yebhizinisi laseBrazil lunemininingwane yokuxhumana esebenzayo yebhizinisi kuphela. Ungasebenzisa lolu hlu lwe-imeyili yebhizinisi laseBrazil ukukhuthaza ibhizinisi lakho emkhakheni waseBrazil b2b. Ungakha uhlu lwakho lwe-imeyili yebhizinisi laseBrazil kusuka kithi. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ye-imeyili yebhizinisi laseBrazil.
Thenga iBrazil B2B Email Lists
Inani lamarekhodi: Isigidi se-4
I-imeyili I-imeyili Uhlu Lokunenzuzo
Uma ngaphezu kwama-10% ama-imeyili ethu egxuma, sizonikeza amakhredithi emininingwane eminingi.
Ngaphakathi kwemizuzu ye-120, ungalanda i-database yabantu oxhumana nabo bese uqala ukuxhumana nezithameli zakho.
Zombili izinqubo ezizenzakalelayo nezezincwadi ziqinisekisa ukunemba kohlu lwethu oluqinisekiswe ngumuntu.
Xhuma nabaphathi bezinga eliphakeme ezinkampanini zase-US, UK, Canada, Europe, Asia, nokuningi.
Ungazihluphi ngokuxhumana nama-generics (afana ne-contact @). Ngohlu lwethu, ungathumela i-imeyili abantu bangempela.
Uhlu lwe-imeyili esezingeni eliphakeme luvumela amabhizinisi ukwenza ukuxhumana kwe-B2B ngentengo ephansi ngokumangazayo.
Landa uhlu lwakho njengefayela le- .csv, ulihlanganise ku-CRM yakho, bese uqala inethiwekhi.
Iqembu lokusekela elibukhoma le-24 / 7 Live.
IBrazil Email Lists Umbuzo & Impendulo